na ny Minisiteran’ny fanabeazam-pirenena nosoloan-dRtoa minisitra Marie Thérese Volahaingo tena ka anisan’izany ny Vivo Energy Madagascar nosoloin’ny tale jeneraliny, Mondher Bouhouchera tena. Niompana tamin’ny lafin-javatra 3 mazava izany fiaraha-miasan’ny roa tonta izany dia ao voalohany ny hanatsarana ny trano famakiam-bokin’ny CEG Ambohipo sy fampitaovana ordinatera an’izany toerana izany mba hahazoan’ireo mpianatra manitatra ny fikarohana ataony. Ny faharoa dia ny fanatsarana ny sehatra maitso sy ny fanokafana “club vert” ao amin’ny Epp Ambohipo mba hahafahana mametraka ny “jardin pédagogique” ao amin’ity sekoly ity ary fahatelo dia ny fanentanana aro-lozan’ny fifamoivoizana ny mpianatra ao amin’ny Epp miisa 20 amin’iny lalam-pirenena faha-2 iny (Ambohimangakely-Moramanga). Anisan’ny hampianarina azy ireo amin’izany ny lalànan’ny fifamoivoizana manankery eto amintsika. Marihana fa ny fahazarany manao asa-soa amin’ny fanabeazana Malagasy no nanisika ny Vivo Energy, izay mpizara sy mpivarotra solika sy menaka isan-karazany marika Shell eto amintsika, nanatanteraka an’ity fifanaovan-tsonia ity.